Ukubuyela kwilali ye-Emperor, kufutshane neOxford
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguJohn/Isobel
Le yindawo yokuhlala edibeneyo kunye negumbi lokulala elahlukileyo elinegumbi lokuhlambela le-en-suite. Okumangalisayo
Ibhedi eneposta kwakucingelwa ukuba yayikhe yasetyenziswa nguMlawuli wokugqibela waseVietnam. Enye i-quirky exotica evela eMpuma ekude, yenza i-ambience engalibalekiyo. Siyibiza ngokuba "Ityotyombe le-Emperor's". Yahlukile kwindlu enkulu kunye nemfihlo epheleleyo.
Iingcango zaseFransi zivuleleka kwipatio yabucala enembono yegadi kunye namasimi angaphaya. Iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise ikhitshi le-annexe encinci kwindlu enkulu.
Indlu yethu ethandekayo yaseCotswold yayikhe yayindawo yentselo, kwaye yaqala ekuqaleni kwenkulungwane ye-19. Sisekwinkqubo yokuyiguqula ibe yindlu yokuhlala kwaye senze konke okusemandleni ethu ukugcina i-pubby ivakale apho kunokwenzeka. 'Ityotyombe le-Emperor' lalisetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo mandulo njengendlu yeti, indawo yomculo kunye nesisele samapolisa elalini! Kodwa ngoku bubunewunewu kodwa indawo ethe kratya enebhedi ebukekayo eneepowusta kunye neepali zetotem ezimbini zaseBurma! Nokuba uza kwikhefu lesixeko, ukhenketho kancinci okanye indawo ezolileyo yokuqhuba izifundo zakho siqinisekile ukuba uya kukonwabela ukuhlala kwesi simo sikhethekileyo.
Nangona le ndlu ikwilali ejikelezwe ngamasimi aluhlaza, kukuhamba imizuzu eli-10 kuphela ukuya eSouth Oxford ecaleni kwendlela yelizwe nangaphezulu kwebhulorho kaloliwe. Nje ukuba useMazantsi eOxford ungatsibela ibhasi kumbindi weOxford okanye uhambe eminye imizuzu eli-15.
Ukungqonge ilali kukho iindlela ezininzi ezintle zokuhamba kunye neNdawo yoLondolozo lweNdalo edityaniswe yimijelo emincinci kunye neeglades ezenziwe ngamaplanga. Emazantsi eOxford kukho iinkundla zentenetya zasimahla kunye nechibi (ukuba ukwindawo yokuqubha endle!). Kukwakho nepuli yokuqubha eshushu evulekileyo ngeenyanga zasehlotyeni. Indawo yegalufa yimizuzu eli-15 yokuhamba, kwaye i-angling ngumsebenzi odumileyo wasekhaya. Isetingi ifanelekile ukufota, ukuzoba njl.
I-ambiance yelali yenye yokuphumla, kodwa kuninzi ekufuneka uyenzile kwaye uphonononge kwindawo ekufutshane- kunye nesixeko saseOxford esinazo zonke izinto ezinomtsalane.
Umbuki zindwendwe ngu- John/Isobel
Sihlala kwindlu enkulu kwaye siya kuhlala sikhona xa kuyimfuneko. Ngokwenene siyakonwabela ukuba neendwendwe kwaye sihlala sijonge phambili ekudibaneni nabantu abatsha.
Iilwimi: العربية, Nederlands, English, Français, Deutsch, Italiano, Español